Banyere Anyị - Hebei Wenwen Trade Co., Ltd
Faux für ngwaahịa, ajị anụ akpụkpọ ;
All iche iche nke plush ákwà, faux ajị anụ, adịgboroja ajị anụ, ajị anụ ajị anụ, Jacquard plush, anụmanụ na-eṅomi ajị anụ, n'ọnụ-agbapụta n'ahụ ajị anụ, wuru ajị anụ, atụrụ ajị anụ, elu ikpo plush ákwà na ihe ndị ọzọ yiri ngwaahịa nke na-popularly ji mee ihe maka ụmụaka, uwe, olu akwa ákwà, uwe, n'uwe, lining ajị anụ, uwe, n'ime nke uwe, blanket, sofas, carpets, akpụkpọ ụkwụ, cushions, Ohiri isi, ji achọ ihe, bedclothes, home textiles na ọtụtụ ndị ọzọ na ngwaahịa.
Roba / EPDM / ịkwanyere akara ibe ;
eji EPDM, PVE, TPE, ČR, Nr, NBR, TPR, Silica na ndị ọzọ na Nlụpụta a usoro nke ngwaahịa, uch ka roba oru ibe, ụzọ na window roba oru ibe, foamed oru ibe, ogbo roba akara ibe, mma roba ngwaahịa. Etinyere na ụgbọala, shipbuilding, ewu nke ụzọ na windo, eletriki ngwa, ime ụlọ ịwụ, pipeline engineering na n'ibu na ọkụ ọrụ.
Agba ígwè efere ;
Isi na ngwaahịa na-prepainted galvanized nchara na galvanized nchara na galvalume nchara na mgbochi mkpịsị aka nchara na corrugated ígwè mpempe akwụkwọ, nke na-tumadi mee na obere ụlọ mmepụta ihe, Ahịa, n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè, n'ámá egwuregwu, ọdụ ụgbọelu, azụmahịa ụlọ, n'ụlọ nkwakọba, ìhè ígwè na ụgbọ mmiri ụlọ, akpakanamde na ụlọ jide ngwa oru ọrụ.
All ndị a ngwaahịa soro ISO 9001 Quality Management System na ISO 14001 Environmental Management System, na-izute Chinese mba ọkọlọtọ na ASTM ọkọlọtọ.
N'ihi na ihe relateds ngwaahịa biko gaa na anyị ukara website: www.wenwencf.com
1) N'ime afọ 10 exporting ahụmahụ na yiri ngwaahịa ka anyị ọtụtụ ọkachamara!
2) nnọọ àgwà akara usoro si ị na-ahọrọ ihe na nhazi!
3) Mpi price na kasị nso nnyefe oge!
4) Nye relateds ngwaahịa customization ọrụ!
Hebei Wenwen Trade Co., Ltd. mgbe nānọgide site azụmahịa aghụghọ nke "elu-edu ngwaahịa & ezi uche price", ọrụ echiche nke "na-egosi nkwanye ùgwù na-ị & agbalị kasị mma anyị", na ndị ọrụ ha mmụọ nke "ime ihe n'eziokwu, ọhụrụ, ịnụ ọkụ n'obi, sureness "na-enye ndị ahịa nke kacha mma na ngwaahịa na ọrụ.